Ogaden News Agency (ONA) – Jaaliyada Ogadeniya ee Victoriya oo Munasabada Ciida meel kuwada ciiday
Jaaliyada Ogadeniya ee Victoriya oo Munasabada Ciida meel kuwada ciiday
Posted by ONA Admin	/ October 26, 2012
Jaaliyada Somalida Ogadeniya ee Victoriya ayaa Munaasabada Ciida maanta isugu timid Xaflad BBQ. Halkaas oo dhamaan xubnaha jaaliyada iyo caruurtaba la keenay. Waxaa xafladaas lagu qabtay Yarraville Park oo ah goobta loogu talagalay dadweeynaha dagan gobalka Victoria in ey ku qabsadaan xaflada lagu magacdaray (BBQ).
Maalintaan ayaa fursad u aheyd dhamaan bulshada kasoqeybgashay munaasabadan farxadeed ee ciida. Waxaa kaloo fursad u aheyd malintaan dhamaan hooyooyinka iyo aabayaasha oo fursad u helay ilmahooda inay helaan goob ay faraxada ciida ku qaataan iyada oo ciyaaro noocyo kala gadisan iyo maaweeliyin caruurba loo sameyay.
Ururka OYSU Melbourne ayaa gacanweyn ka geeystay xafladaan, ayagoo lawareeygay maaweelada ciyaalka, oo meesha kusoo bandhigay barmaamijo kala duwan oo ilmaha loogu talagalay.
Waxaan Alle ka baryeeynaa in cidaan ciideeda kale aan dhamaan ku ciidno dhulkeena Ogadeni.